ပြဿနာ၊ အခက်အခဲ – Kanaung
Dhamma	ပြဿနာ၊ အခက်အခဲ	MaMa Lay
တစ်နေ့တစ်နေ့ ကိုယ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကို အစီအစဉ်ရေးဆွဲတဲ့အခါမှာ အဆင်မပြေတာတွေကို ဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ပါ ထည့်ဆွဲထားရမယ်။ အဆင်ပြေတာတွေချည်းပဲ တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ အဆင်မပြေတာလည်း ပါမှာပဲ။ ဒါကြောင့် သူ့ကိုထည့်ထားရမယ်။
ပြဿနာတစ်ခုကိုတည့်တည့်ရင်မဆိုင်ချင်တဲ့အခါ ကျန်းမာရေးမကောင်းတာနဲ့ စိတ်ကိုအာရုံပြောင်းစရာအဖြစ် အစားထိုးတာတွေလုပ်တတ်တယ်။ (မသိစိတ်က လုပ်တာ) အဲဒီလိုဆိုရင် အကြောင်းရင်းကလည်း ပြေလည်မသွားဘူး။ နောက်ထပ်ပြဿနာလည်း တိုးလာတယ်။ မှန်မှန်ကန်ကန်နည်းနဲ့ ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပါ။ ပြဿနာကို မဆိုင်တဲ့ဘက်ကိုလွှဲရင် ပြဿနာတိုးလာတယ်။ စိတ်ကိုအာရုံလွှဲတာ ကောင်းတဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းနည်းမဟုတ်ဘူး။
ပြဿနာတစ်ခုကြုံနေတဲ့အခါမှာ အကြောင်းမဟုတ်တာကို အကြောင်းလို့ယုံနေခြင်းအားဖြင့် ဖြေရှင်းနည်းမမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့် သက်သာမှုမရနိုင်ဘူး။ ဖြေရှင်းနည်းမှားနေလို့ အခက်အခဲတွေပိုများလာတာကိုသဘောမပေါက်ဘဲ အရင်လုပ်နည်းအတိုင်းဆက်လုပ်နေရင် အရင်အဖြေပဲရမယ်။ ဒုက္ခပဲ ထပ်တိုးလာမယ်။
ပြဿနာကို ဥာဏ်ပါပါနဲ့ဖြေရှင်းဖို့ကိုဦးစားပေးပြီး အဖြေကိုရှာရတာက စိတ်သက်သာမှုပိုရတယ်။ ဥာဏ်ပညာလည်း ပိုကြီးလာတယ်။ တကယ်လို့ ပြဿနာက ကိုယ့်ဘက်ကဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ အဖြေရှာလို့မရနိုင်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ဆက်ပြီးတော့ စိတ်ဆိုးနေမှာလား။ ကိုယ့်ဒေါသကြောင့် ကိုယ့်မှာပူလောင်နေတာကို လက်ခံမှာလား။ ဒေါသပြေအောင် ကိုယ့်သဘောထားနဲ့မျှော်လင့်ချက်ကို ပြင်ရင်ကောင်းမလား။
အန္တရာယ်ကိုရင်မဆိုင်တာကမှ အကြီးမားဆုံးအန္တရာယ်။ အခက်အခဲကိုရင်မဆိုင်တာက အကြီးမားဆုံးအန္တရာယ်။ သေချာတာကိုမှလုပ်ချင်တာ အကြီးမားဆုံးအန္တရာယ်။ ဆုံးရှုံးမှုကိုကြောက်လွန်းတာ အကြီးမားဆုံးအန္တရာယ်။
ဘာအခက်အခဲကိုမှရင်မဆိုင်ရဲတဲ့သူဟာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ စိတ်ဓာတ်ရင့်ကျက်တဲ့သူ၊ အသိဥာဏ်ရင့်ကျက်တဲ့သူ၊ ပညာတတ်တဲ့သူ၊ အစွမ်းအစမရှိတဲ့သူ မဖြစ်နိုင်ဘူး။
ဘာမှမစွန့်စားတဲ့သူဟာ ဘာမှမလုပ်ဘူး။ သူ့မှာ ဘာမှမရှိဘူး။ သူ ဘာမှဖြစ်မလာဘူး။ မစွန့်စားတဲ့သူ၊ ဘာမှမလုပ်တဲ့သူ၊ ဘာအခက်အခဲကိုမှရင်မဆိုင်ရဲတဲ့သူဟာ ကိုယ်ဆင်းရဲတာ စိတ်ဆင်းရဲတာကို ရှောင်ချင်ရှောင်လို့ရမယ်။ ဒါပေမယ့် သူ ဘယ်လိုမှ ဘ၀အကြောင်းကိုသိတဲ့သူမဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဘာကိုမှ သိတဲ့သူမဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဘာပညာမှ ရမှာမဟုတ်ဘူး။ ဘာကိုမှ ခံစားနိုင်တဲ့သူမဖြစ်နိုင်ဘူး။ အသိဥာဏ်နဲ့စိတ်ဓာတ် ကြီးထွားရင့်ကျက်တဲ့သူ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ချစ်နိုင်တဲ့သူ ချစ်တတ်တဲ့သူ မဖြစ်ဘူး။ ဘာမှအခက်အခဲမရှိတဲ့ဘဝဟာ ဘာမှစိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းဘူး။
ပြဿနာတွေ၊ အခက်အခဲတွေ၊ ဒုက္ခတွေဆိုတာဟာ ပညာရဖို့နဲ့ အသိဥာဏ်ကြီးဖို့ရာ အတွေ့အကြုံတွေပါပဲ။ အဲဒီအတွေ့အကြုံမျိုးမရှိရင် အဲဒီပညာမရနိုင်ဘူး။ အဲဒီအသိဥာဏ်စိတ်ဓာတ်မျိုး မရနိုင်ဘူး။ ရင့်ကျက်မှု မြင့်မြတ်မှု မရနိုင်ဘူး။
ဘဝမှာ အခက်အခဲတွေမရှိရင်ကောင်းမလားလို့ မေးရင်.. အမှတ်တမဲ့တွေးကြည့်ရင်တော့ ဘဝမှာ ဘာမှအခက်အခဲမရှိရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့တွေးကြမှာပဲ။ တချို့ဆိုရင်လည်းပဲ ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာ ထည့်တောင်းလေ့ရှိတယ်။ ‘လိုတရတဲ့ဘဝမျိုး ဖြစ်ရပါလို၏’ အခက်အခဲဆိုတာ ဘဝရဲ့သဘာဝပါပဲ။ ရှိနေမှာပဲ။
သို့သော်လည်းပဲ တဖြည်းဖြည်း လူ့ဘဝရဲ့သဘာဝကို ပိုပြီးတော့သဘောပေါက်လာတဲ့အခါမှာ တဖြည်းဖြည်း အခက်အခဲရဲ့သဘာဝကိုလည်း ပိုပြီးတော့သဘောပေါက်လာတဲ့အခါမှာ အခက်အခဲမရှိတာမကောင်းပါဘူး။ တွေ့ကြုံလာရတဲ့အခက်အခဲကို သတိနဲ့ဥာဏ်နဲ့ သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းရှိဖို့ပဲလိုပါတယ်လို့ သဘောပေါက်လာတယ်။
အခက်အခဲတွေကိုနားလည်ပြီးဖြေရှင်းလို့ အရည်အချင်းတိုးလာတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုတိုးလာတာကို ခံစားရတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုပိုတိုးလာအောင်ပဲ လုပ်ချင်နေတယ်။ ဒါကြောင့် တတ်နိုင်သလောက် အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေကို ရင်ဆိုင်ချင်တယ်။ မရှောင်ချင်တော့ဘူး။
ဘာအခက်အခဲမှမရှိတဲ့ဘဝကို နေရတဲ့လူဟာ ဘာရင့်ကျက်မှုမှမရှိနိုင်ဘူး။ ဘာမှအခက်အခဲမရှိရင် လုပ်စရာမရှိတော့ဘူး။ ဥာဏ်လည်း မထုတ်ရတော့ဘူး။ ဝီရိယလည်း မထုတ်ရတော့ဘူး။ သည်းခံရတယ်ဆိုတာလည်း မရှိတော့ဘူး။ သဘောထားကြီးရတယ်ဆိုတာလည်း မရှိတော့ဘူး။ အခက်အခဲတွေမှာ အင်မတန်အံ့သြစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတရား ရှိပါတယ်။ အခက်အခဲတွေဟာ အကျိုးရှိပါတယ်။
ဒကာမကြီးတစ်ယောက်ရှိတယ်၊ တရားဝါသနာပါတယ်။ သူက ဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါ သူ့ဆုတောင်းလေးကို ပြောပြတယ်.. “တပည့်တော်တော့ ဆုတောင်းတယ်ဘုရား။ ဖြစ်လေရာဘဝမှာ လူဆိုးတွေ၊ လူမိုက်တွေ၊ လူယုတ်မာတွေနဲ့ မတွေ့ရပါလို၏လို့ ဆုတောင်းပါတယ်” တဲ့။ အဲဒီတော့ ဘုန်းကြီးက “ဒကာမကြီးဆုတောင်းက ပြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြည့်နိုင်ဖို့အလားအလာတော့ အလွန့်အလွန်နည်းပါတယ်” လို့။ မြတ်စွာဘုရားတောင်မှ အဲဒီဆုတောင်း မပြည့်ခဲ့ပါဘူးနော်။
ဒါကြောင့် ဘုန်းကြီးက ဘယ်လိုပြန်ပြောရလဲဆိုတော့ “ဒကာမကြီးဆုတောင်းလေးကို ပြင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ တော်တော်ကောင်းမယ်။ အဲဒီလူဆိုးတွေ လူမိုက်တွေ လူယုတ်မာတွေ(သူပြောသလိုပဲ)နဲ့ တွေ့ရတဲ့အခါမှာ သူတို့ဆိုးသလို မိုက်သလို ယုတ်မာသလို ကိုယ်ကလိုက်မလုပ်မိဖို့၊ သူတို့နဲ့တွေ့ရတဲ့အခါမှာ ကိုယ့်အတွက်လည်းအန္တရာယ်မရှိအောင် နေတတ်၊ ထိုင်တတ်ဖို့နဲ့ သဘောထားကြီးဖို့၊ ခွင့်လွှတ်နိုင်ဖို့၊ အဲဒီလို ဥာဏ်ပညာမျိုး ရင့်ကျက်မှုမျိုး ရပါလို၏လို့တောင်းရင်တော့ ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။”
“အခက်အခဲတွေကို များများရင်ဆိုင်ပြီးတော့ သတိကြီးကြီး၊ ဥာဏ်ကြီးကြီး၊ သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့သူ၊ ကျော်လွှားနိုင်တဲ့သူပဲ ဖြစ်ရပါလို၏။” အခက်အခဲမရှိတဲ့ဘဝ သက်သက်သာသာနေရတဲ့ဘဝမျိုးကို ရပါစေလို့ ဘယ်သူ့အတွက်မှဆုမတောင်းဘူး၊၊ ကိုယ့်ဘဝမှာတွေ့ကြုံလာတဲ့အခက်အခဲတွေကို စိတ်ဓာတ်အင်အားကြီးကြီး၊ ဥာဏ်အင်အားကြီးကြီးနဲ့ ရင်ဆိုင်ပြီးတော့ကျော်လွှားနိုင်ဖို့၊ ပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာ အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိဖြေရှင်းလိုက်တိုင်း ပိုပြီးတော့အသိဥာဏ်ကြီးတဲ့သူ၊ သဘောထားကြီးတဲ့သူ ဖြစ်လာဖို့၊ လူကြီးဖြစ်လာဖို့ အဲဒီလိုဆုမျိုးပဲ တောင်းချင်ပါတယ်။ ပြဿနာဟာ လူတစ်ယောက်ကို ပိုပြီးတော့လူကြီးဖြစ်အောင်စမ်းပေးတဲ့ စာမေးပွဲနဲ့တူပါတယ်။
အခက်အခဲတစ်ခုကို ရင်ဆိုင်လိုက်တိုင်း ရင်ဆိုင်လိုက်တိုင်း၊ အတွေ့အကြုံတစ်ခုထဲက မြင့်မြတ်တဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုကို ရလိုက်တိုင်း ရလိုက်တိုင်း ကိုယ့်အတွက် အဲဒါ တိုးတက်ဖို့၊ ကြီးပွားဖို့၊ ပြည့်စုံဖို့၊ အောင်မြင်ဖို့ရာအတွက် အကြောင်းတစ်ခုတိုးလာပြီး ကိုယ်ဟာ ပိုပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့သူ ဖြစ်ပြီ။
အခက်အခဲတစ်ခုခုကိုကြုံရတဲ့အခါမှာ ကိုယ့်အသိဥာဏ်နဲ့ကိုယ်စဉ်းစားပြီးတော့ “ငါ ဘာလုပ်ရမယ်”ဆိုတာ စဉ်းစားပြီးဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့သူဟာ သူ့စိတ်ထဲမှာ ရပ်တည်ရာတစ်ခုခု ရှိနေတယ်။ ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာလုံးဝမသိတော့တဲ့အခါ ဘာကိုမှမဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခါမျိုးမှာ သူ့မှာ ငါဆိုတာတောင်ပျောက်သွားပြီ။ သူ့ရဲရပ်တည်ရာ မရှိတော့ဘူး။ သူ့မှာ ဘာသတ္တိမှမရှိတော့ဘူး၊ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတာဟာ လူတွေမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခထဲမှာ အဆိုးဆုံးအကြီးမားဆုံးဒုက္ခလို့ ပြောလို့ရတယ်။
We cannot expect to go through life without being confronted with pain. Through our meditative practice we can learn to experience pain without hurt.
ဒုက္ခနဲ့မကြုံရဘဲနဲ့ ကိုယ်ဆင်းရဲမှုမကြုံရဘဲနဲ့ ဘဝခရီးကိုဖြတ်သန်းသွားလို့ မရပါဘူး။ တရားအားထုတ်ခြင်းအားဖြင့် စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်မှု၊ အေးချမ်းမှု၊ ရင့်ကျက်မှု ရလာမယ်။ ဝိပဿနာဥာဏ်တွေ ရင့်ကျက်လာမယ်ဆိုရင် ဒုက္ခနဲ့ကြုံရပေမယ့် စိတ်ဆင်းရဲမှုသိပ်မဖြစ်တော့ဘူး။
ကိုယ်တွေ့ကြုံခံစားရတဲ့ဒုက္ခထဲက လေးနက်တဲ့အသိဥာဏ်ကို ရအောင်လုပ်နိုင်တဲ့သူ၊ ဒုက္ခကြုံလို့ စိတ်ထားပိုပြီးလေးနက်သွားတဲ့သူဟာ အောင်မြင်မှုရတဲ့သူလို့ ဆိုနိုင်တယ်။ ကောင်းတာတွေကြုံရပြီး စိတ်ထားညံ့သွားတဲ့သူဟာ ရှုံးနိမ့်သွားတဲ့သူလို့ ဆိုနိုင်တယ်။
ပြဿနာကို ကိုယ်က ရင်ထဲမှာလွယ်ပြီးတော့သွားနေရင် ဘယ်သွားသွား လွတ်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။တစ်ခုခု ပြဿနာကြုံလာပြီဆိုရင် သတိလေးထားလိုက်ပါ။ ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ်ပြန်ကြည့်ပါ။ ပြဿနာအသေးလေးကို ငါ ပြဿနာအကြီးကြီးဖြစ်အောင် ပုံကြီးချဲ့နေတာများ ဖြစ်နေရော့သလား။ ဒီပြဿနာဖြစ်ရတဲ့ကိစ္စမှာ ငါ့ဘက်ကတာဝန်မကင်းတာ ဘယ်လောက်ပါနေသလဲ။
ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတိုက်ရိုက်တိုက်ခိုက်တာဟာ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘက်က ပြုပြင်ခွင့်မရအောင်လုပ်တာနဲ့ တူတယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတိုက်ရိုက်မတိုက်ခိုက်ဘဲနဲ့ လုပ်တာကိုင်တာပြောတာဆိုတာလွဲနေရင် အဲဒါကို စေတနာနဲ့ လေးလေးစားစားလေးထောက်ပြလို့ရှိရင် တစ်ဖက်သားမှာ ပြုပြင်ဖို့ရာအခွင့်ရတယ်။
ပြဿနာ၊ အခက်အခဲရှိလာပြီဆိုရင် သဘောထားမတူညီမှုကို ပယ်ဖျောက်ဖို့မလိုဘူးနော်။ ဒီမတူညီမှုကိုအခြေခံပြီးတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပိုပြီးတော့နားလည်သွားဖို့၊ အဲဒါကိုပဲကြိုးစားရမှာ။ တူသွားရင် မကောင်းဘူး၊၊ တူသွားဖို့လည်း မလိုဘူး။ ညှိနှိုင်းဖို့လိုတယ်။
အခက်အခဲရှိတိုင်း ပြဿနာရှိတိုင်း သဘောထားမတိုက်ဆိုင်မှုတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်း ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့ ပိုပြီးတော့နားလည်မှုရသွားအောင် ကြိုးစားကြည့်ပါ။ တကယ်နားလည်မှုရသွားပြီးတော့ ပိုပြီးတော့ရင့်ကျက်တဲ့ဆက်ဆံရေး ပိုပြီးတော့ကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေး ပိုပြီးတော့တစ်ဦးကိုတစ်ဦးလေးစားတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုး ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။
သတိပါလာလို့ရှိရင် ပြဿနာကို ပိုပြီးတော့ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့လူဖြစ်လာမယ်။ ကိုယ့်ရဲ့သဘောထားကိုက အခက်အခဲပြဿနာကိုဖြေရှင်းမယ်ဆိုတဲ့ သဘောထားရှိလာမယ်။ အခက်အခဲကိုပြဿနာကိုရှောင်မယ်ဆိုတဲ့ သဘောထားမဟုတ်ဘူးနော်။ ပြဿနာမရှိ ပြဿနာရှိအောင် မလုပ်တော့ဘူး။ ကိုယ်က ပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့သူ ဖြစ်လာတယ်။✌🏽✌🏽
Tags DhammaှိDhamma
Previous Articleသားသမီးများဆီသို့ ​ပေးစာ	Next Articleအဆီပိုတွေ ယူပစ်သလို ဖယ်ရှားရအောင်	Comments (0)